Andravoahangy : nirefotra ny basy, lasan’ireo jiolahy ny vola amin’ny baoritra | NewsMada
Raim-pianakaviana iray naratra nodarohan’ny jiolahy nandritra ny fanafihana toeram-pivarotana iray eny Andravoahangy, omaly antoandro. Nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika ireo jiolahy. Vola amin’ny baoritra no lasan’izy ireo…
Nirefotra ny basy nandritra ny fanafihan’ireo jiolahy miisa telo nirongo basy mahery vaika teny Andravoahangy, omaly antoandro. Araka ny fitantaran’ireo niharam-boina, niditra an-keriny tao am-pivarotana ireo jiolahy. Ny roa niditra tao an-trano, ny iray kosa niandry teo ivelany nampitahotra tamin’ny basy. Nandrahona avy hatrany ny ry zalahy raha vantany vao tafiditra tao an-trano. Na teo aza izany, niezaka nanohitra ihany ny raim-pianakaviana tao amin’ilay fivarotana, saingy nodarohan’ireo jiolahy ka naratra mafy. Lasan’ireo jiolahy kosa ny volabe amin’ny baoritra. « Tena tsy nampoizina hoe jiolahy mihitsy ry zalahy satria toy ireny olona hividy entana ireny. Somary hafahafa ihany anefa ny fihetsik’izy ireo nony niditra tao amin’ity toeram-pivarotana ity. Teo vao taitra ny rehetra nahita ilay jiolahy nijoro nitazona basy », hoy ny fitantaran’ny mpivarotra iray mifanila amin’ilay niharan’ny fanafihana. Nampitahotra ireo mpivarotra teo amin’ny manodidina mba samy tsy hihetsika na hiantso vonjy ireo jiolahy. Nanapoaka basy kosa ry zalahy rehefa tafavoaka ilay toeram-pivarotana.
Nandroba mpivarotra finday indray ry zalahy…
Mbola tsy afa-po tamin’izay azony tao amin’ilay toeram-pivarotana notafihiny ry zalahy ka nifindra nanafika toeram-pivarotana finday tsy lavitra ity toeram-pivarotana voatafika ity. Noraofin’ireo jiolahy avokoa ny finday sy ny vola tao amin’ity toeram-pivarotana ity, raha ny fitantaran’ireo niharam-boina. Tsy afa-nanao na inona na inona koa ireo voatafika nanoloana ny fitaovam-piadiana teny am-pelatanan’izy ireo.
Nihorohoro tanteraka ny mponina eny Andravoahangy sy ny manodidina tamin’ity fanafihan-jiolahy ity. Tonga teny an-toerana ny polisy nanao ny fanadihadiana.